अछामका जनतालाई साेध्नुस् भिम रावलले के विकास गर्नुभयाे- यज्ञबहादुर बाेेगटी « risingsunkhabar
अछामका जनतालाई साेध्नुस् भिम रावलले के विकास गर्नुभयाे- यज्ञबहादुर बाेेगटी
प्रकाशित मिति : २५ बैशाख २०७८, शनिबार ०५:४२
यज्ञबहादुर बोगटी सुदूरपश्चिमको अछाम जिल्ला क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुहुन्छ । सुदूरपश्चिम कोभिड महामारी र एमाले भित्रको रडाको दुवैले यतिबेला चर्चामा छ ।
भीम रावलले नेपालमा बहुदलिय व्यवस्था आएदेखिनै सूदुरपश्चिमबाट कुनै न कुनै रुपमा प्रतिनिधित्व गर्नुभयो । लामोसमयदेखि नेपालको राजनीतिको केन्द्रमा रहेर काम गर्नुभयो । अनि लामो समयसम्म सांसद् र मन्त्री पनि हुनुभयो । यो अवधिमा अछामले चाहीँ के पायो ? अछाममा कोभिड नियन्त्रणको तयारी र विकासको अवस्था विषयमा अछाम क्षेत्र नं २ का प्रतिनिधि सभा सदस्य यज्ञबहादुर बोगटीसँग गरिएको यो कुराकानी ः
सुदूरपश्चिमका विकट पहाडी जिल्ला हुन्: अछाम, बाजुरा र बझाङ । त्यस भित्र पनि मेरो निर्वाचन क्षेत्र अझ विकट छ । विकट क्षेत्र भए पनि मेरो दुई नं क्षेत्रमा अहिले नै डरलाग्दो अवस्था पनि बनि सकेको छैन, तर अवस्था सामान्य पनि छैन । यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्यो भने अवस्था सहज बन्छ, अन्यथा भयावह हुनसक्छ ।
प्रदेश सरकारको भूमिका चाहीँ कस्तो छ नि ?
प्रदेश सरकार मार्फत जति काम हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेन भन्ने हो ?
अस्पताललाई भेण्टिलेटर मेशीन पनि दिइयो । तर सञ्चालनमा आएको छैन । प्रदेशका मन्त्रीले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा त्यो मेशीन सञ्चालन भएन भने धनगढी ल्याएर राख्छु भनेर गैरजिम्मेवार कुरा गर्नुभएको छ ।
कि प्रदेश सरकारले नसक्ने भएँ भनेर जिम्मा लगाउनु पर्यो । हामी केन्द्र सरकारसँग लडाईँ गरेर स्रोत साधन ल्याउँछौँ । ल्याउन सकिएन भने जनताको बीचमा गएर भनौँला । नभए जिम्मा लिनेले काम त गर्नु पर्यो नि त ।
समग्र राष्ट्रिय राजनीतिले चाहीँ कोभिड नियन्त्रणको काममा प्रभाव पारे जस्तो लाग्दैन ?
रात विरात जनताको फोन आउँछ । सहयोग गर्नुपर्यो, डाक्टरलाई भनिदिनु पर्यो भन्नुहुन्छ । विकट गाउँका मान्छेले फोन गर्नुहुन्छ । हामी मर्ने भयौँ, अस्पतालमा हामीलाई भर्ना छ कि छैन भन्नुहुन्छ । डाक्टरहरुलाई फोन गर्नुपर्छ । उहाँहरुले पनि ज्यान जोखिममा राखेर काम गरिरहनुभएको छ । तर राष्ट्रिय राजनीतिले यसलाई अल्मल्याएको छ ।
१५/२० वर्षसम्म मन्त्री र माननीय भएका मान्छेलाई गाली हुँदैन । उहाँहरुलाई हाइहाई हुन्छ । म सांसद् भएको तीन वर्ष भयो गाली किन खानुपर्ने ?
त्यहाँबाट तपाईँकै पार्टीको नेता भीम रावलले त लामोसमयसम्म केन्द्रमा राजनीति पहुँच सहितको नेतृत्व गर्नुभयो, त्यसको लाभ चाहीँ लिन सकेन अछामले ?
यो कुरा मलाई नसोध्नुस्, मलाई भन्दापनि अछामका जनतालाई सोध्नुस् । तपाईँ साँच्चै खोज पत्रकारीता गर्ने हो भने अछामको रामारोशनको जनतालाई सोध्नुस् अछामले के पायो भनेर । सिउडी, सोकट र मल्लेखको एउटा गरिब परिवारमा गएर सोध्नुहोला । तुर्माखानको एउटा विकट गाउँमा जानुहोला, अनि के छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट थाहा पाउनुहुन्छ ।